Cisco yakaburitsa vhezheni itsva yeantivirus ClamAV 0.101.0 | Linux Vakapindwa muropa
ClamAV ndeye yakavhurika sosi antivirus yeWindows, GNU / Linux, BSD, Solaris, Mac OS X uye mamwe masisitimu anoshanda eUnix.
ClamAV inopa akateedzana ezvishandiso zveantivirus zvakanyatsogadzirirwa email kuongorora. Dhizaini yeClamAV inotyisa uye inochinja nekuda kweyakaomeswa tambo.
Iyo ine simba rekutarisa rakabatanidzwa nemutsetse wekuraira uye maturusi ekugadzirisa dhatabhesi otomatiki Iyo purojekiti kodhi inoparadzirwa pasi peGPLv2 rezinesi.
1 Nyowani vhezheni yeClamAV
1.1 Main nyowani maficha eClamAv 0.101.0
1.2 Kuvandudzwa kwekutsigira
1.3 Shanduko kune libclamav raibhurari API
2 Maitiro ekuisa ClamAv paLinux?
Nyowani vhezheni yeClamAV
Munguva pfupi yapfuura Cisco yakaunza vhezheni yakakosha yeiyo ClamAV package inosvika vhezheni yayo 0.101.0 iyo yainowedzera nayo mitsva yekuvandudza uye kugadzirisa madhigi kutenderedza vhezheni yayo yapfuura.
Izvo zvakakosha kuyeuka kuti chirongwa cheClamAV chakapfuudza mumaoko eCisco muna2013 mushure mekutengwa kwekambani yeSourcefire, iyo inovandudza ClamAV neSnort.
Main nyowani maficha eClamAv 0.101.0
Mukuburitswa kutsva kweantivirus, rutsigiro rwakawedzerwa kuburitsa data kubva kumafaira akagadzirwa muRAR 5Panzvimbo peyaimbove unrar unacker, raibhurari yeUNRAR 5.6.5 yakagoverwa neRarLabs yave kushandiswa.
Kune rumwe rutivi, sarudzo uye mirairo yeiyo clamscan utility uye iyo clamd.conf yekumisikidza faira yakagadzirwazve.
Nekuda kweizvozvo, sarudzo dzakanangana nekuratidzira analytics-based yambiro izvozvi dzave kupihwa neakavakirwa "Alert *" uye "- alert- *".
Iyo algorithmic yekuona yekugadzika yakapihwa zita kunzi HeuristicAlerts, saka tsigiro yesarudzo dziri pamusoro ichiri kuchengetedzwa, asi inogona kubviswa mukuburitswa mune ramangwana.
Mu clamd.conf uye command command interface sarudzo OnAccessExtraScanning yakaremara kwenguva pfupi Nekuda kwekunge uchine dambudziko nekugadzikana uye drain drain yakagadziriswa.
Nyowani AlertEncryptedArchive uye AlertEncryptedDoc sarudzo dzakawedzerwawo kuratidza nyevero nezve kutsvaga mafaira akanyorwa kana zvinyorwa.
Zvinyorwa zvine mutsindo zvinotsigira byte kuteedzana kuenzanisa, zvichibvumira, nekufananidza nemukana wakafanana muSnort, kubvisa uye kuenzanisa imwe nhamba yemabheti zvichienderana nesaizi yakatarwa uye kukanganisa.
Raibhurari ye libmspack yakagadziridzwa kuita vhezheni 0.7.1 alpha (vhezheni 0.5 alpha yaimboshandiswa) uye yakawedzerwa nematurusi ekuongorora mafaira akashatiswa kana asiri emhando yeCAB.
Mukuvaka kweantivirus yeWindows, mugadziri mutsva akurudzirwa, Yakavakwa neInnoSetup 5.
Authenticode masiginecha akawedzera rutsigiro rwezvimwe zvinhu zveWindows system mafaera uye yakasimbisa mashandisirwo ayo nekuongorora mafaera anokwanisika muPXNUMX fomati.
Kune rumwe rutivi, chaiyo siginicha kuongororwa kwakaitwa pane masisitimu ane "hombe endian" byte odha.
Uye iyo yakareruka kodhi yekutarisa magirazi mune iyo freshclam utility yakadzora nguva yekuregeredza magirazi mushure mekukanganisa, uchifunga nezve kunonoka pakuonekwa kwemasiginecha matsva kana akatakurwa kuburikidza nezviri mukati zvekutumira network.
Ipo muibfreshclam iyo yakambodzorwa sarudzo yeAllowSupplementaryGroups yakambodzingwa, iyo yakatobviswa mu freshclam, yakabviswa.
Shanduko kune libclamav raibhurari API
Mune cl_scandesc, cl_scandesc_callback, uye cl_scanmap_callback mashandiro, gakava rakawedzerwa kutamisa zita refaira (rinoshandiswa kuratidza zvimwe zvikanganiso zvine ruzivo uye yambiro, pamwe nekuwedzera kweyemhando faira kugadzira).
Ongororo sarudzo dze seti yeminda dzinoiswa muchimiro chine mireza akapatsanuka, zvichiita kuti zvive nyore kuwedzera sarudzo itsva kana zvichidiwa.
Iyo cl_cleanup_crypto () basa rakadzikiswa, iyo yakarasikirwa nerevo yayo mushure mekuwedzera izvo zvinodiwa zveiyo OpenSSL vhezheni (pamusoro pe1.0.1.
Iyo CL_SCAN_HEURISTIC_ENCRYPTED sarudzo yakakamurwa kuita sarudzo mbiri CL_SCAN_HEURISTIC_ENCRYPTED_ARCHIVE uye CL_SCAN_HEURISTIC_ENCRYPTED_DOC zvakasiyana.
Maitiro ekuisa ClamAv paLinux?
Kuisa iyi application, vhura terminal pane yako system uye uteedzere rairo pazasi, zvinoenderana nekugovera kwauinako:
Debian, Ubuntu uye zvigadzirwa
Fedora uye zvigadzirwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Cisco yakaburitsa vhezheni itsva yeantivirus ClamAV 0.101.0
Mubvunzo: iyi antivirus ine chaiyo-nguva dziviriro kana inoshanda chete kune echinyorwa mascans?